Ny marika hotely 20 tsara indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Ny hotely kilasy voalohany sy malaza dia afaka manova ny fahasamihafana misy eo amin'ny dia tsara sy ny mahafinaritra. Tao anatin'ny folo taona lasa izay, mipoitra toy ny holatra any amin'ny vazan-tany rehetra ny trano fandraisam-bahiny kintana dimy (ary eny hatramin'ny kintana enina sy fito) aza. Na dia vaovao tsara ho an'ny mpandeha mahay manavaka aza izany, tsy ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy sy mamirapiratra rehetra no mahafeno ny fenitry ny traikefa voadio, tsy hay hadinoina ary mihoa-pampana.
Rojo hotely vitsivitsy ihany no mahomby amin'ny fanomezana ny tsy fitoviana amin'ny hatsarana tsy manam-paharoa izay andrasan'ireo globetrotters raitra amin'izao andro izao. Ireo marika ireo dia misongadina ary mamela ny fifaninanana amin'ny serivisy tsy misy ilana azy, toerana miavaka (na tora-pasika, tanàna na toerana lavitra any an-tany efitra), toeram-pitsaboana ara-pahasalamana, sakafo mahavelona, ​​trano fonenana mahafinaritra, ary - farany fa tsy ny kely indrindra - politikam-piarovana ny tontolo iainana.
Ireto ny marika hotely 20 tsara indrindra eto an-tany.
Ny Leela Palaces, Hotels and Resorts
Ny Red Carnation Hotel Collection
Enina Senses Hotels Resorts Spas
Toerana tokana & tokana
Rocco Forte Hotely
COMO Hotels sy Resorts
Ny harena nangalarina 20 ambony indrindra eran-tany 2022